Miaraha amin'ny mpanjifanao | Martech Zone
Miaraha amin'ny mpanjifanao
Zoma, Desambra 18, 2009 Talata, May 6, 2014 Travis Smith
Mpikirakira switchboard an'ny sekoly taloha
Tamin'ny antso vao haingana ho an'ny orinasam-pifandraisan-davitra lehibe iray, izay tsy horesahiko (toa ny kintana maty manga ny sary famantarana azy ireo),
Tezitra tamin'ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa aho? manafintohina, fantatro.
Nandritra ny antso rehetra dia nitanisa izay tadiaviko izy, ary nilaza toy izao izy: “Ity no fifanarahana izay matetika ny mpanjifako toy ny ", ary" avelao aho hiresaka amin'ny manager mba hahazo us fifanarahana tsara kokoa ”, ary“ Azoko tsara ny fahasosoranao, tsy haiko ny antony izy ireo ataovy izany ”. Mety tsy dia miharihary izany amin'ny voalohany, fa toa niteny tamiko izy. Nahatsapa ho toy ny nanana lehilahy (wo) tao anatiny aho, mole, namana iray izay niditra an-tsokosoko tao amin'ny departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa miandry fotsiny ny antsoko hamita ny caper anay.
Tsotra, izy no nanao ahy us.
Matetika loatra ny fifandraisantsika amin'ireo solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia mifanohitra ary feno valiny ratsy. Toa tena niahy ny toe-javatra nisy ahy ity solontenan'ny mpivarotra ity. Te-hanao sonia tsara ahy amin'ny zavatra iray izy, ary hampahafinaritra ahy amin'izany. Tsy fifampiraharahana kely ihany koa io. Niala tamin'ny serivisy zanabolana nataoko tamina fahitalavitra nomerika mandroso aho. Tena nanampy be izy tamin'ny fanazavana ny safidiko sy ny fihainoana izay nolazaiko azy. Tsy indray mandeha nandritra ny fiantsoana dia natahotra aho fa tsy nihaino ny zavatra tadiaviko izy na tsy hanaja izay holazaiko.
Ny lesona voalohany eto dia ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia ny fihainoana ny mpanjifanao, ary ny fiezahana hanome vahaolana mahasoa (iraisana) amin'ny olana iray. Ity solontena ity dia namaha ny olako tamin'ny fahasoavana, faharanitan-tsaina ary tao anatin'ny adiny iray latsaka! Raha toa ka toa izao daholo ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, dia tsy ho nifindra tamin'ny AT&T (whoops!) Intsony aho avy amin'ny Dish Network (whoops!).
Ny lesona lehibe kokoa dia ny zavatra niainako - ny mpampiasa traikefa - miaraka amin'ity solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ity dia nanatsara ny fahitako ny orinasa manontolo. Na dia mbola tsy nifandray tamin'ny tena vokatra aza aho dia efa tsara ny zavatra niainako mpampiasa. Tadidio fa tsy maninona ny hatsaran'ny vokatrao - raha ratsy ny fiainana ny vokatra dia tsy te hanandrana akory ny olona.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifasolontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Manamarina ny laharan'ny tranokalanao amin'ny fikarohana manokana
Rafitra fitantanana famandrihana: CheddarGetter
Dec 21, 2009 amin'ny 9: 41 AM
Ilaina tsotra izao ny miara-mipetraka amin'ny mpanjifanay, indrindra ho antsika rehetra tafiditra amin'ny media sosialy.